Jiolahy… Tsy jiolahy fa natao sorona… : Maty voatifitry ny polisy teny Itaosy i Rasta | NewsMada
Jiolahy… Tsy jiolahy fa natao sorona… : Maty voatifitry ny polisy teny Itaosy i Rasta
Lehilahy iray maty voatifitry ny polisy teny Itaosy ny zoma alina teo. Ny polisy milaza fa jiolahy efa raindahiny Rasta. Ny havan’ny maty kosa nanambara fa tsy jiolahy ny havany fa nataon’ny polisy sorona fotsiny. Milaza ny hanao hetsika hanoherana izany izy ireo….
Ny alin’ny 1 desambra hifoha asabotsy 2 desambra teo, tokony ho tamin’ny 12 ora sy fahefany, nisehoana trangana asa fanendahana miharo herisetra teny amin’ny faritra Bemasoandro Itaosy, ka olona telo no voaendaka nandritra izany. Araka ny fanazavan’ny polisy, lasan’ireo jiolahy avokoa ny finday, ny vola teny amin’izy ireo ary ny firavaka izay teny am-bozonany. Ny iray tamin’izy ireo izay tsy nanana na inona na inona kosa, niharan’ny vono sy daroka, araky ny fanambaran’ireto farany teny amin’ny polisy.
“Efa misy moa ny rafitra sy ny lamina izay napetraka manokana ho fisorohana ny asan-jiolahy amin’iny faritra iny, ka fotoana fohy taorian’izay, nifanena tamin’ireo polisin’ny kaomisarian’Itaosy nandalo nanao fisafoana amin’iny faritra iny ireo voaendaka, ka avy hatrany, tsy nisalasala nanatona sy nitantara ny zava-nanjo azy izy ireo”, hoy ny polisy.
Niroso avy hatrany tamin’ny fikarohana ireo nahavanon-doza ireo polisy. Nilaza ireto voaendaka fa tsy mbola lasa lavitra ireo jiolahy nahavita izany. Fotoana vitsy monja taorian’izany, tsikaritra ireo telo lahy izay voalaza fa nanendaka sy nidaroka ireo olona nitaraina.
Raha vao nahita ireo olona niaraka tamin’ny polisy izy ireo, nirifatra nitsoaka. Raikitra ny fifanenjehana ka voasambotra ny roa tamin’izy ireo raha toa ka tafaporitsaka kosa ny namany iray. “Nandritra ny fotoana izay nisamborana ireto roa lahy anefa, mbola nikasa hitsoaka ihazo elakelan-trano maizimaizina ny iray tamin’izy ireo. Rehefa nanao ny fampitandremana sy ny tifi-danitra ny polisy mba hijanonany, mbola nirifatra ihany izy ka tsy nijanona. Vokany, voatifitra ity farany ary rehefa noentina teny amin’ny hopitaly, tsy tana intsony ny ainy noho ny ratra nahazo azy”, hoy ihany ny polisy.
Jiolahy… tsy jiolahy
Araka ny fanambaran’ny polisy hatrany, ity farany izay fantatra amin’ny solon’anarana hoe Rasta, izay tsy iza akory fa jiolahy efa nahazoan’ny polisy loharanom-baovao marim-pototra ary efa nifampitadiavana nanomboka ny volana novambra teo. “Izy ity izay voatonona matetika amin’ny asa fanafihana mitam-piadiana sy vaky trano ary fanendahana anaty fitohanan’ny fiara amin’iny faritra Ampasika, Itaosy sy ny manodidina iny”, hoy ihany ny fanamafisana.
Ireo olona telo voaendaka kosa, mbola nanamarina, fa i Rasta sy ireo namany no nanendaka sy nidaroka azy ireo ny alin’io andro voalaza etsy ambony io. Mbola tratra teny amin’izy ireo ihany koa ireo vola sy firavaka ary finday izay norobaina.
Andaniny anefa, milaza ny fianakavian’ity lehilahy maty voatifitra ity fa tsy jiolahy ny havany. “Mpanao baolina lavalava ireo ary taraiky fodiana avy namonjy fety izao sendra ny polisy izao. Efa nentiny tanaty 4×4, avy eo notifiriny”, hoy ireo fianakaviana. Mihevitra ireto fianakaviana fa hanao hetsika hanehoana fa tsy jiolahy ny havany ary tsy hanaiky izy ireo. Milaza fa hanamafy izany koa ny mpanao rugby mpiara-milalao amin’ilay voatifitra.
Efa eo am-pelatanan’ny polisy ny momba ity hetsika ity ary nilaza ireo fa tsy hilefitra velively manoloana ny asan-jiolahy, sy ny tsy fanarahan-dalàna ary izay mety ho endrika fihoaram-pefy manoloana izany.